Eedeyn ah in Suuriya sun lagu adeegsaday - BBC News Somali
Eedeyn ah in Suuriya sun lagu adeegsaday
Image caption Syria Chemicals
Kooxaha u ololeeya xuquuqda dadka ee dalka Suuriya ayaa ku waramaya in weerar kaloo sunta kaloriinta loo adeegsaday weerar ay qaadeen ciidamada dowladda.
Waxay sheegeen in dhowr qof ay saameysay gaaska oo lagu riday maalintii arbacada, xaafadda Harasta ee duleedka magaalada Dimishiq.
Warkan ayaa imaanayo, afar maalin kadib markii weerar kan lamid ah lagu qaaday deegaanka Kfar Zeita ee waqooyiga magaalada Xuma, halkaas oo dad badan ku dhaawacmeen wax labada dhinacba ay ku magacaabeen suntan koloriinta ee gaaska ah.
Dadka cisbitaalada la geeyay ayaa la sheegay in qaar kamid ah aysan neefsan Karin kadib markii suntan ay saameysay, dhaqaatiir ayaana la sheegayaa inay ku dadaalayaan badbaadinta.
Sida ay sheegeen kooxaha ololeeyayaasha, oo fiidiyow ku baahiyay internet-ka, waxay sheegayaan inay dadka ay dhibaato ka soo gaartay gaas sun ah oo dowladda ay ku riday Harasta, oo waqooyiga ka xigto magaalada Dimishiq, waxaana maamulo mucaaradka.
Image caption Baarayaasha sunta Suuriya
Calaamadaha la helay waxay lamid yihiin dadkii ay saameysay weerarkii isbuucii hore eek a dhacay magaalada Xuma.
Mucaaradka iyo dowladda waxay sheegeen in gaas kan uu ka sameysan yahay suntan koloriinta.
Labada dhinac ayaa midba mid ka kale ku eedeeyay dhacdada. Mana ahan markii ugu horeysay oo ay dad ku dhintaan weeraro sun oo lagu qaado dad rayid ah.
Waxaa jiro walaacyo soo kordhayo oo ah inay oo ku saabsan warar ah in suntan koloriinta sidan oo kale markastaa loo adeegsado.
Inkastoo ay jiraan xeerar lagu xakemeynaayo inaan suntan koloriinta loo adeegsan goobaha dagaalka, hadana waa markii ugu horeysay oo loo adeegsado suntan, markii ugu xumeyd ee la isticmaalay waxay ahayd dagaalkii koobaad ee dunida.